उत्तरसँगको तनावबीच दक्षिण कोरियाले पनडुब्बीबाटै मार हान्न सकिने क्षेप्यास्त्र बनायो! - Dainik Online Dainik Online
उत्तरसँगको तनावबीच दक्षिण कोरियाले पनडुब्बीबाटै मार हान्न सकिने क्षेप्यास्त्र बनायो!
प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०७८, मंगलबार ४ : ०७
दक्षिण कोरियाले मंगलबार आफैंले विकास गरेको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको छ। योनहाप न्युज एजेन्सीका अनुसार उत्तर कोरियाको आणविक खतरासँग जुध्न दक्षिण कोरियाको नयाँ हतियारले सहयोग पुग्नेछ।
अधिकारीहरुका अनुसार हाल दक्षिण कोरियाले सफल रुपमा परीक्षण गरेको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र पनडुब्बीबाट मार हान्न सकिन्छ, अर्थात पानी मुनीबाट प्रहार गर्न सकिन्छ। पनडुब्बीबाट मार हान्न सकिने भएपछि रणनीतिक हिसाबमा दक्षिण कोरियालाई दुश्मनलाई आक्रमण गर्न निकै सहज हुने देखिएको छ।
यसअघि गत जनवरीमा मात्र उत्तर कोरियाले आफूहरुले पनडुब्बीबाटै आक्रमण गर्न सकिने क्षेप्यास्त्र विकास गर्न खोजेको जानकारी दिएको थियो।
उत्तरको समाचार संस्था केसीएनएका अनुसार सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले सो हतियारलाई विश्वकै शक्तिशाली हतियार भनेका थिए। जनवरीको सैन्य परेडमा चारवटा क्षेप्यास्त्रको नमूना प्रस्तुत गरिएको थियो जनु पनडुब्बीबाट आक्रमण गर्न सकिने जनाइएको थियो।
योनहापका अनुसार पनडुब्बीबाट आक्रमण गर्न सकिने एसएलबीएम क्षेप्यास्त्रले ५ सय किलोमिटरसम्मको दुरी तय गरी दुश्मनलाई आक्रमण गर्नसक्छ। सोमबार मात्र दक्षिण कोरियाले आगामी वर्ष रक्षा अनुसन्धान बजेट तोक्दै १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने जनाएको थियो।
उत्तर कोरियाले संयुक्त राष्ट्रसंघको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै क्षेप्यास्त्र तथा आणविक हतियार परीक्षण जारी राखेका बेला दक्षिण कोरियाले पनि शक्तिशाली हतियार परीक्षण गरेको हो।
उत्तर कोरियाको खतरा मध्यनजर गर्दै दक्षिण कोरियामा ३० हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छन्। सन् १९५० को कोरियाली गृहयुद्धपछि नै अमेरिकी सेनाहरु दक्षिण कोरियामा तैनाथ भएका हुन्।